Firaisankina ho an’i Yuli Riswati, ilay Indoneziana mpiasa an-trano noroahana fa nitantara momba ny fihetsiketsehana tany Hong Kong · Global Voices teny Malagasy
"Niara-nijoro tamin'ny tolom-panafahana nataon'ny vahoaka ao Hong Kong i Yuli."
Voadika ny 12 Desambra 2019 5:59 GMT
Pikantsarin'ny lahatsarin'ny antsafa niarahana tamin'i Yuli Riswati. Lahatsary YouTube avy amin'i singintaiwan.
Noroahana tamin'ny 2 Desambra 2019 noho ny visa-ny lany daty ilay mpanoratra indonezianina nahazo loka sady olon-tsotra mpanangom-baovao, ary mpiasa an-trano nifindra monina, Yuli Riswati, izay nitantara ny fihetsiketsehana tao Hong Kong nanomboka ny volana Jona.
Niasa an-trano nandritra ny 10 taona tany Hong Kong i Yuli. Saingy sady mpaka sary sy mpanoratra ihany koa izy izay nitatitra ny toe-draharahan'ny Indoneziana mpiasa mpifindra monina any Hong Kong. Nahazo ny Lokan'ny Literatioran'i Taiwan ho an'ny Mpifindra Monina tamin'ny taona 2018 izy noho ny asany momba ny fiantraikan'ny herisetra ara-nofo sy ny fikorontanana ara-tsaina izay niainan'ireo Indoneziana mpiasa mpifindra monina.
Nandany ny andro tsy niasany nitantarana ny famoriam-bahoaka isan-kerinandro tany Hong Kong izy nanomboka ny volana Jona mba hampahafantarana amin'ireo Indoneziana mitovy asa aminy mikasika ilay hetsi-panoherana. Nilaza izy fa ny hanampy ireo mpiasa mpifindra monina hahatakatra ny fihetsiketsehana mba tsy ho voafitaky ny fanodikodinam-baovao amin'ny aterineto no tanjony.
Mino ny vondrona sivily any Hong Kong fa noho ny antony ara-politika ny fisamborana sy ny fandroahana azy ary nanao fihetsiketsehana firaisankina ho an'i Yuli izy ireo tamin'ny 7 Desambra:
— 真回安然 ☪ Cui Haoxin (@ismaelan) December 7, 2019
Na dia noroahan'ireo manampahefana Shinoa nankany Indonezia aza i Yuli Riswati dia mbola tohina ihany aho rehefa nahita ity tenirohy mijoro miaraka amin'i Yuli ity. Androany, handeha hanao fihetsiketsehana ireo vahoaka ao Hong Kong ho an'ity rahavavy Indoneziana be herimpo ity ao afovoan-tanàna ao an-kianjan'i Edinburgh, amin'ny 3 ora tolakandro.
Nosamborin'ny manampahefanan'ny fifindra-monina tany amin'ny toeram-piasany i Yuli satria efa lany daty tamin'ny 23 Septambra ny visa-ny, rehefa nivoaka ny tati-baovao momba azy sy ny fanohanany ny vahoaka ao Hong Kong. Manana fifanekena manan-kery mandritra ny roa taona izy izay nosoniaviny tany am-piandohan'ity taona ity saingy hadinony ny nanavao ny visa-ny izay lany tamin'ny volana Jolay. Nilaza izy fa adinony ny nanao izany satria ny pasipaorony aloha no tokony nohavaoziny voalohany.
Araka ny filazan'ny Federasiona Iraisam-pirenena Misahana ny Mpiasa An-trano, matetika mamela ireo manana visa efa lany daty hanohy ny asany ny tompon'andraikitra misahana ny fifindra-monina raha mbola miantoka ny fifanarahana nifanaovan'izy ireo ny mpampiasa azy ary manazava ny zava-misy an-tsoratra. Nanao izany i Yuli sy ny mpampiasa azy saingy mbola voasambotra ihany izy.
Nolavina ny fangatahany ary notanana nandritra ny 28 andro izy izay nandrisihana azy hisintona ny fangatahany amin'ny fanitarana ny visa-ny:
Nanoratra aho fa nosintomiko ny fangatahako visa satria notanana ela loatra aho ary tsy nahafantatra ny fotoana hivoahako. Ary mbola nilaza indray ilay tompon'andraikitra fa tsy afaka manoratra aho satria hanome olana ho azy ireo ny mpisolovava. Tamin'ny farany, voatery tsy maintsy nanoratra aho fa nosintomina ny fangatahako visa, ary hiverina any Indonezia aho hanao fangatahana visa indray.
Betsaka ny vondrona ao anatiny sy ivelan'i Hong Kong no naneho fanohanana an'i Yuli. Mino ny PEN Hong Kong fa nenjehina i Yuli mba hanakiviana ireo mpiray monina mandalo hafa tsy handray anjara amin'ny fihetsiketsehana:
Izahay dia manameloka ity fihetsika ity izay mety natao hampitahorana ireo mponina tsi-maharitra sy hanakanana azy ireo tsy handray anjara na hitatitra sy haneho hevitra momba ny hetsika politika eto Hong Kong.
Nanontany ihany koa ity vondrona ity momba ny mahamaika ny fandroahana an'i Yuli. “Gaga izahay noho ny hamehana sy ny tsy fanarahan-dalàna miharihary izay nitranga, ary hiezaka hanaraka ity raharaha ity.”
Nandritra ny fihetsiketsehana nokarakaraina tamin'ny 7 Desambra dia niantso tamin'ny telefônina i Yuli ary nizara ny zava-tsarotra iainany tao anatin'ny toeram-pitazonana mpifindra monina.
Nilaza tamin'ny telefônina izy nandritra ny fihetsiketsehana androany fa nosavaina hatrany anaty akanjony tamin'ny andro voalohany nahatongavany tao amin'ny foibem-pitazonana mpifindra monina Castle Peak Bay ary noterena hanala ny fitafiany teo anoloan'ny dokotera lahy tamin'ny andro faharoa (fihantsiana lehibe ho an'ny Miozolomana tahaka azy, hoy izy).
Nisaotra an'ireo izay naneho firaisankina sy nanohana ny raharahany izy:
vehivavy nohidiana, satria nikasa hitantara ny tantaran'ny vahoaka izay tsy nanao na inona na inona afa-tsy nanasokajy ny vahoakany toy ny olom-pirenena ambaratonga faharoa – nisaotra antsika izy
Nisaotra antsika izy ary tena tsy mendrika ny fisaorany isika
Naseho tao amin'ilay toerana nanaovana fihetsiketsehana ny sasany tamin'ireo sariny :
misy andian-tsary mahafinaritra nalain'i Yuli!
‘Rindrina’ fanohanana an'i Yuli:
— 🖐𝗠𝘂𝗿𝗸𝗿𝗼𝘄☝ (@ginkgoesd328) December 7, 2019
Misaotra izay rehetra nanatrika ny fihetsiketsehana [mijoro miaraka amin'i Yuli] androany (sy ireo nanohana anay saingy tsy afaka)!
Misy fitakiana miisa efatra natao ho an'ny governemanta ny fanangonan-tsonia izay nataon'ny Vondrona Manohana An'i Yuli:
Nahoana i Yuli no lasibatry ny fanagadrana sy ny fandroahana nefa tsy voaheloky ny fitsarana ?
Tsy maintsy miatrika sy manatsara ny fomba mahatsiravina ao amin'ireo tobim-pitazonana ny Fifindra-monina.
Tokony hajanon'ny governemanta ny famoretana rehetra ataony amin'ny vahoaka mifahatra.
Tsy maintsy manaja ny fahalalahana mandray anjara amin'ny politika ataon'ny mpiasa an-trano ny governemanta, ao anatin'izany ny fahalalahana maneho hevitra sy ny fandraisana anjara politika.
Manana antso ho an'ny vahoakan'i Hong Kong namany i Nickolas Tang:
Miara-mijoro amin'ny tolona vaovao ho fanafahana ataon'ny vahoaka ao Hong Kong i Yuli. Fotoana izao hampisehoantsika ny firaisankina miaraka aminy amin'ny ady ho an'i Hong Kong izay ahitana ireo mpiasa mpifindra monina voakarakara araka ny tokony ho izy sy amim-pahamendrehana.
Ireto ambany ireto ny sary vitsivitsy avy amin'ny hetsika firaisankina ho an'i Yuli tamin'ny 7 Desambra
Sary: sary Flickr avy amin'ny Federasiona Iraisam-pirenena ho an'ny Mpiasa An-trano, (CC BY-NC-ND 2.0)